सलह किरामा राँगा–खसीको मासुमा भन्दा बढी पौष्टिक तत्व पाइने
शनिवार नेपाल प्रवेश गरेको सलह किराको बारेमा सरकारले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान शुरु गरेको छ । डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार पर्सामा हिजो मात्रै सलह किरा मा’रेर खाएको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बताए । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र विषादी विज्ञ महेश आचार्यले सलह किरा मान्छेले पनि खान सक्ने र यसमा राँगा–खसीको मासुमा भन्दा बढी पौष्टिक तत्व पाइने बताए ।
सलह किरा दानाका लागि एकदमै पौष्टिक तत्व मानिन्छ । मानिसका लागि पनि यसबाट पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने बताइन्छ । नेपालमा त्यसको खपत कति हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर विदेशतिर यसलाई दानाको रुपमा मात्र होइन मानिसले पनि खाने गरेकोपाईएको बताएका छन् । सलह किरालाई व्यवसायिक रुप दिन पनि सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
सलह किरा मा’रेर ल्याउनेलाई सरकारले रकम दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए । प्रदेश ५ मा सलह किरा मा’रेर ल्याउनेलाई किलोको २० रुपियाँ दिने त्यहाँको सरकारले घोषणा नै गरेको छ र बुटवलका दुई जनाले नगद पनि पाईसकेका छन् । केन्द्रबाट पनि यस्तो घोषणा गर्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।